Tag: u doodista astaanta | Martech Zone
Tag: u doodista astaanta
Maaddaama macaamiisha ay noqdaan kuwo dhegaha-ka-dhago u leh suuq-geynta carqaladeynta, waxaa lagama maarmaan ah in magacyadu ay aqoonsadaan u-doodayaashooda isla markaana ay siiyaan aaladaha lagama maarmaanka u ah inay ka caawiyaan gudbinta alaabadooda iyo adeegyadooda Barxadda gudbinta ee Extole waxay abuureysaa barnaamijyo u-doodid oo u dhigma noocyada ugu waaweyn. Wadaagista Nooca Calaamadda ah Abuur khibrad wadaag wadaag u doodid isku-dhafan. Barnaamijka gudbinta ee loogu talagalay astaantaada ayaa macaamiishaada badan u rogi doonta u doodayaal waxayna kordhin doonaan wacyiga sumadda. Extole waxay bixisaa softiweerka suuq geynta gudbinta
Iyada oo qayb ka ah muuqaalka Suuqgeynta Mawduucyada, Suuqgeynta Dijital ah ayaa illaa iyo hadda ahayd habka la doorbiday ee loogu talagalay Noocyada inay ku gaaraan oo ay ka qayb galaan dhagaystayaashooda khadka tooska ah. Nooca caadiga ah ee Suuqgeynta Dijitaalka ah wuxuu ka kooban yahay isku-darka Email, Raadinta iyo Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada wuxuuna illaa iyo hadda u adeegsaday qaab qaab iyo lacag bixin ah si loo abuuro loona qaybiyo waxyaabaha ku jira astaanta internetka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray caqabado iyo doodo ku saabsan istiraatiijiyada, cabirka, natiijooyinka iyo ROI ee warbaahinta lacag bixinta
Khamiis, Maarso 9, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Markii aan dib u milicsaday tobankii sano ee la soo dhaafay macaamiisheenna hay'adda, macaamiil badan ayaa yimid oo tagay kuwaas oo aan si kama 'ah ula kulannay dadaalkeenna suuq-geynta. Si kastaba ha noqotee, aasaaska ganacsigeennu wuxuu ahaa suuq-ka-hadal afka ah oo ka imanaya macaamiishaas oo aan soo saarnay natiijooyin sannadihii la soo dhaafay. Xaqiiqdii, seddex ka mid ah soo jeedimaha aan hada ka shaqeyno waxay si toos ah ula xiriiraan macaamiishii hore ee aan la shaqeynay. Maaha wax lala yaabo in u doodayaasha sumaddu